Indlu ezimeleyo e-Sa Tanca, eChia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGiacomo
I-Cottage yimizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka elunxwemeni enegumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa, ikhitshi elixhotyiswe, igadi yabucala, iveranda kunye nendawo yokupaka.
Indlu ezimeleyo emalunga ne-40 square metres ebandakanya ikhitshi elinezixhobo, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ngamashiti, iitawuli, izitya, iLCD TV, isixhobo sokomisa iinwele, i-ayina, i-air conditioning, i-wifi yasimahla, i-barbecue, izitulo zedekhi, iambrela kunye neebhayisekile zasimahla.
I-cottage ijikelezwe yigadi enkulu kwaye igcinwe kakuhle. Ngaphaya kweveranda egqunyiweyo, enikwe itafile yegadi kunye nezitulo, ingca yesiNgesi iyanwenwa, ihonjiswe ngeentyatyambo eziqhelekileyo kunye nezityalo, iindawo ezinomthunzi kunye nezihlahla zeMeditera.
Ecaleni kwendlela yokungena kukho indawo yokupaka yabucala.
Indlu ibekwe kwisitrato sangasese, ithule kodwa ingabi yodwa, ijikelezwe buhlaza kodwa iimitha ezingamakhulu ambalwa ukusuka elunxwemeni kunye neenkonzo eziphambili: iimarike, imivalo, iicuba kunye neeresityu.
Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kuzo naziphi na iimfuno zeendwendwe, izicelo ezithile okanye ulwazi malunga nendawo kunye neempawu zayo, kwiindlela kunye nezinto ezikhangayo okanye izinto ezenzeka kwisiza.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$906